Qare - Wikipedia
Boga "Xabxab" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Qare, Qaro, Xabxab waa miro lacuno oo aad uuga baxo dalka Soomaaliya ama wadamada kale oo kulul. Qaraha waxoo asalkiisa ka imaaday qaarada Afrika, maanta waxoo ka baxaa wadamada kale oo kulul sida aasiya ama bariga dhexe. qaraha dhulka oo ka bixi karo waa in oo ahaadaa dhul aad u kulul, isla markaas neh oo ahaadaa dhul qaleel ah.Qaraha meelaha oo kufiicanyahay waxaa ka mid ah, meelaha saxaarada ah, sida woqooyiga afrika, halkaas oo dadbadan noloshooda caawiyaa.
1 Noocyada Qaraha
4.1 Waxtarka qaraha
4.2 Caafimaadka iyo Qaraha / Xabxabka:
4.3 Soonka iyo cunista ama cabidda Qaraha:
qaraha qaarkood way kala duwanyihiin, qaar waxaa jiro dhaxda jaale ka ah, qaarna waxay yihiin gaduud.
qaraha marka uu bisilyahay, waxaa ku garan kartaa, korkiisan waa cagaar oo sibibix ah. Haddii aad garaacdo, waxaa ka maqli kartaa dhawaaq, isla markaas waxaa ka ogaan kartaa in uu bisilyahay iyo in kale. Qaraha marka aa kala jarto, dhaxda waxa ayuu kaleeyahay hilib gaduud ah. Qaraha waxa ayuu ka koobanyahay biyo qaboow oo casiir ah oona macaan.
Qaraha waa miro sidiisa lagu cuno. Marka aad cunaysid waa in aad qaraha kala goysaa isla markaasna hilibka dhaxda ku jiro aad ka cuntaa. Qaraha waxaa kale loo isticmaalaa dhinaca qudaarta ama casiirka.Qaraha mararka qaarkood waxaa ayaa lagu qasaa miro kale, sida ayuu dhadhanka u bedelo.
Qaraha ama Xabxabka waa midho aad faa'ido u leh jirka, waa midhaha ugu biyaha badan inta la ogyahay, waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 92% inuubiyo yahay, saas ay tahayne waxaa ku jiro nafaqo kala duwan oo jirka uusan ka maarmin kuwaas oo kala ah Vitamin A, B6, C, E iyo borotiinno kala duwan. Waxaa kaloo qaraha ku jiro macdanta bootaasiyamta oo unug walba oo jirka ka mid ah uu u baahan yahay. Qaraha kuma jiro wax dufan ah, wayna ku yartahay maadada karboohaydrayt-ka, sidaa awgeed laguma tiriyo midhaha lagu cayilo. Qaraha waxaa ku badan maaddada loo yaqaanno "Lycopene" waa maddoo ku yar midhaha kale, waxayna cilmibaarayaasha sheegaan in maadadaas inkastoo ay ku yartahay laga helo midhaha yaanyada, saytuunka gaduudan iyo cinabka gaduudan. Maadada "Lycopene" waxay ka qeyb qaaataa caafimaadka wadnaha, lafaha iyo yaraynta khatarka kansarka qanjirka ragga "borostaatada" Waxay kaloo maadadaan la dagaallantaa sunta jirka ku jirto. Markasta oo qaraha aad u bislaado oo aad u sii gaduutto, maadada "Lycopene" way ku sii badan tahay. Borotiinka qaraha laga helo waxaa u badan nooca loo yaqaanno "citrulline" waxayna muhiim u tahay xididada dhiigga, waxayna kordhisaa qulqulka dhiigga. Waxaa kaloo qaraha ku jira maadada kaalsiyamta iyo birta inkastoo ay ku yaryiihiin.
B- Ka hortagga caabuqa iyo Qaraha / Xabxabka: sidaan horay u soo xusayba, maadada "Lycopene" waxay yareysaa halista caabuqa iyadoo hoos u dhigto waxyaabaha ka qeyb qaata caabuqa iyo inay yarayso sunta jirka, sidaa awgeed takhtaatiir ayaa kula taliso dadka qaba xanuunnada riixa, roomaatiisamka iyo murqa xanuunka in ay badsadaan cunista iyo cabista qaraha.
E: Maqaarka iyo Timaha: Maadada fitamiin A: waxay u roon tahay kobcinta unugyada maqaarka iyo tinta, waxayna ka hortaggaa jir qallaylka. Fadlan halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan fitamiinnada iyo cunnada laga helo: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5781.0.html
Faa'idooyinkaa kor ku xusan awgood, qaraha waxaa lagu xisaabiyaa midhaha ugu horreeya oo haddii la heli karo in lagu afuro ay fiican tahay, sababtuna waa sidatan: 1- Qaraha oo oonka u roon iyo fuuqcelinta jirka 2- Qaraha oo dheefshiidka u roon oo caloosha iyo mindhicirrada u diyaariya cuntooyinka aad ku afuri rabitd. 3- Qaraha oo qulqulka dhiigga kordhiyo taasoo qofka uu ka heli karo nashaad iyo firfircooni, khaas ahaan salaadda taraawiixda. 4- Qaraha oo leh faa'idooyin nafaqo jirka uu u baahan yahay.
Midho dhaadheer ama wareegsan oo leh diir adag, iniino badan, iyo saxar macaan oo leh biyo sare. Waxay ahayd mid ka mid ah cuntooyinka ay dadka isku dhafan iyo reer binu Israa'iil ay muujiyeen hilowga intii ay ku jireen cidlada markii ay Masar ka tageen. Qaraha (Citrullus vulgaris) ayaa muddo dheer lagu beeri jiray Masar iyo qeybaha kale ee Bariga Dhexe.
Barandhe · Basal · tamaandhada · toonta · Dabocase
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qare&oldid=219167"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:54.